Xidigaha Xulka Koonfur Galbeed oo afka ciidda u daray dhigooda Jubbaland. | Somali National Television - sntv.so
Home CIYAARAHA Xidigaha Xulka Koonfur Galbeed oo afka ciidda u daray dhigooda Jubbaland.
Xidigaha Xulka Koonfur Galbeed oo afka ciidda u daray dhigooda Jubbaland.
Kulanka ka tirsan tartanka kubadda cagta ee dowlad goboleedkada oo ka soconaya magaalada Muqdisho ayaa waxaa galabta foodda is daray xulalka kubadda Cagta Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo ah xulka difaacanaa sanadkan koobka, kaasi oo ka dhacay garoonka kubadda cagta ee Eng, Yariisow.
Cayaarta oo ay u soo daawasho tageen dad weyne aad u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka Gobolka Banaadir, isla markaana kala taageerayay labada Xul ee Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, isla markaana sitay hal ku dhigto ayaa muujiyay sida ay u taageersanyihiin tartamada nuucaani oo kale ah oo la xiriirta isdhexgalka bulshada.
Labada xul ayaa soo bandhigay cayaar aad u xiisa badneyd oo ay ku qanceen dhamaan dadkii u soo daawasho tagey garoonka, waxaana cayaarta qeybtii hore lagu kala nastay 1-0 oo ay la yimaadeen Xulka kubadda cagta ee Koonfur Galbeed.
Qeybtii labaad ee cayaarta ayaa labada dhinac waxa ay muujiyeen dadaal aad u badan, inkasta oo xidigaha xulka Jubbaland ay heleen gool ku laad, balse Goolhayaha Kooxda Koonfur Galbeed uu si wacan uga badbaadiyay gool ku laadkii loo dhigay Jubbaland, waxaana cayaarta waqtigii loogu talagalay ay ku soo idlaaday 1-0 oo ay guusha ku raacday xidigaha Xulka Koonfur Galbeed.
Previous articleDalalka mamnuucay duulimaadyada uga yimaada UK oo isa soo taraya.
Next articleGabar uu dhalay Ra’iisul Wasaarihii hore Itoobiya oo xabsiga loo taxaabay.
Cayaartooyda Hayland oo ka soo dagay garoonka Aadan Cabdulle
Tababaraha Juventus oo Ka hadlay tagitaanka Ronaldo